Archive Mon 29 Oct - Sun 04 Nov - HIC-ET-HIAKA
Mon 27 Aug - Sun 02 Sep
Mon 05 Nov - Sun 11 Nov
Mon 29 Oct - Sun 04 Nov
00h02 02 November 2018
NY FAHANTRANA SY NY LOTO
Efa « antitra » mihitsy aho vao mahita valiny sy fanazavana amin'ny zavatra maro. Izay nahakasika ny tena moa, ka nitera-pahavoazana, dia sira latsaka an-drano. Fa ny ankapobem-piainana, dia ankehitriny vao manam-potoana handinihana. Ary tsy nahadinika raha tsy nandalovana sy niainana.
Rehefa "mahantra" ve tsy maintsy maloto, na voretra. Eny tsy misy hambahamba no valiny, raha vao mitarazoka ny "fahantrana". Tsy mitovy ny maloto sy ny voretra, fa miray volo ihany rehefa ela ny ela !
Voazava miaraka amin'izay koa ilay voasoratra hoe "izay tsy manana, na ny kely ananany aza, hoesorina aminy"!
Tama-miondan-tsandry ity izaho, ka nony nionda-mololo dia nikoha-davareny. Mba nadio ihany ilay trano nomena hivahinianana teo am-pidirana, fotsy mangatsaka araka ny itiavako azy ny rindrina sy ny lambalamba rehetra.
Fa tsy niherina ny herinandro dia niova loko izy ireny. Solitany no anaovana afo. Tsy taza-maso fa misy setroka mainty nameno molaly ny kihon-drindrina rehetra. Nipetaka teny ny tranonkala, nampangain'ny hazavan'ny masoandro maraina.
Tsy afako ara-potoana, satria « tsy hitako ». Mifoha alohan'ny masoandro aho ary matory aoriany, raha ny jiro ampiasaina dia ampy hifankahitana fa tsy mety hanaovan-javatra matotra : fanadiovana, zaitra, soratra, vakiteny. Ny somambisamby eo ihany, fa ny maso koa efa sembana hatrany an-kibon-dreny. Ariana fotsiny ny fotoana tsy ahitana torimaso satria tsy ahavitana na inona na inona. Fatiantoka no anaran'izany.
Tsy hitahita akory, dia mainty ny vilany. Mitankovana arina ny fitaovana rehetra, indrindra fa ireo plastika. Tamin'ny voalohany, vitako ihany ny mamerina manadio. Lany ny rano sy ny savony. Lany ny fotoana. Sasatra aho. Fatiantoka daholo izany.
Tokana ilay afom-patana. Andrasana ho vita ny voalohany, vao ataingina ny faharoa, vao alefa ny fahatelo. Tsy azo ialana lavitra, sao may, sao ritra, sao tsy masaka. Dia eo ny tena. Fatiantoka ihany koa iny.
Tsy resahana ny tsy fahavaran-tena : mainty ny hoho, madity ny volo, vakivaky ny vodin-tongotra, tsemboka noho ny hazakaza-dava ny tena, izay akanjo hitsin'ny tanana ihany no ijolohana, mifararemotry ny havizanana ny endrika. Raha kiraro no anaovana, rehefa tsy ho menan'ny tany dia ho lany ila hitongilam-paladia. Mihena ny fatokisan-tena ka mety hahatonga lesoka eo amin'ny fifandresen-dahatra. Fatiantoka mihitsy izany.
Raha izany rehetra izany no mitohy sy mitambatra, dia mitsontsorika ny zotran'ny fari-piainana, amin'ny fatrany sy amin'ny lentany.
Raha izany no iainana mandavan-taona, dia ho lasa adin-tsaina hiteraka aretina. Ho lasa korontana maha-kizintina.
Raha izany no mitoetra fa tsy mandalo, dia zara raha hisy fiainam-pianakaviana. Mpiara-monina ny mpivady, misahana fiompiana zaza fahanana tsy ho faty, fa tsy beazina ho olom-banona !
Dia voavaly ilay fanontaniana hoe rehefa "mahantra" ve tsy maintsy maloto. Eny tompoko. Lany amin'ny zavatra maika kokoa iankinan'ny aina ny hery sy fotoana tokony hidiovana sy hanadiovana. Lany amin’ny zavatra nekena tany ivelany ny tokony hitiavana sy hifankatiavana ao an-tokantrano.
Hay ny manisina rehefa tsy an'ny tena ny lelo.
Mba iaino mandritra ny iray volana monja ny fiainana tsizarizary kokoa, hahitanao azy!
Permalink Categories: UN PEU DE MOI Tags: fahantrana, havoretrana, maloto 0 comments
Mon 15 Apr - Sun 21 Apr
Mon 01 Apr - Sun 07 Apr
Mon 25 Mar - Sun 31 Mar
Mon 04 Feb - Sun 10 Feb
Rondro H REGNIER - 308 posts
SURREXIT ET PRAECEDIT VOS IN GALILAEAM on KMAIR*
Honneur aux bosseurs du social pontissalien on twito+ RDM-ROW #LaVarenne
AMIN'NY ANDRO FAHATELO on HIC-ET-HIAKA
L'ÉCLIPSE on KMAIRLINE
LA Femme de Michel Delpech dévoile ses dons de... on Contacts Interdimensionnels Exobiologie...
07h54 12 May 2017
Ce mardi 9 mai 2017, dans l'émission #Rivotra diffusée en...
21h03 21 Feb 2014
Présenté par MAPAR, majoritaire au sein de l'assemblée...
18h51 21 Feb 2014
20h13 20 Feb 2014
12h00 19 Apr 2019
AMIN'NY ANDRO FAHATELO
Zoma masina 2019. Afaka mitsara izay tsy ampy...
00h00 06 Apr 2019
Te hivazavaza faran’izay mafy aho hanazava sy hanaporofo...
00h00 04 Apr 2019
AVY ANY KOWEIT
Firifiry moa ireo nanao an-ditra, nahita lalana...
08h00 01 Apr 2019
Il faudrait que je garde des traces de toutes ces...
00h00 01 Apr 2019
Prétérition no filazana an’ilay rehefa hoy isika...
23h55 29 Mar 2019
TAPA-POROHANA MBOLA MANETONA
Tamin’ny fotoanan’ny fanjanahantany, hono, dia mafy ny...
12h04 18 Mar 2019
Ireto voninkazo ireto no atao hoe Cosmos....
17h00 12 Mar 2019
L’art, a priori , rime avec esthétique. Artiste est...
15h15 10 Mar 2019
CLASSE AFFAIRES, AFFAIRE CLASSEE
Izany fitoviana izany dia tsy misy ary tsy hisy...
00h00 10 Mar 2019
MISAVIKA (DEMOCRATIE A LA CON)
Ny tiako holazaina dia hoe nisy fotoana nanaovana...
rondro h régnier